अबको केही घण्टामा को बन्ला नयाँ आइजीपी ? तीन दावेदारको यस्तो छ हैसियत – Gorkha Sansar
अबको केही घण्टामा को बन्ला नयाँ आइजीपी ? तीन दावेदारको यस्तो छ हैसियत
गोर्खा संसार २०७४, २७ चैत्र मंगलवार १६:४८
नेपाल प्रहरी र शसस्त्रका वहालवाला आइजीपी (महानिरीक्षक)को सेवा अवधि बुधबारबाट सकिँदै छ । नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्याल र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले ३० वर्षे सेवा हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन् ।
खासमा आइजिपी बनाउने प्रमुख अधिकार भने सरकारसँग छ। त्यसैले त प्रतिश्पर्धीहरु गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेता र आफन्तमार्फत् लविङमा रहेको स्रोत बताउँछ । सेवामा भएका कार्यमुल्यांकनका आधारमा कार्कीभन्दा खनाल या खरेलको सम्भावना बढी रहेको प्रहरीको उच्च स्रोत बताउँछ । न्युजसेवाबाट
२०७७, १२ भाद्र शुक्रबार ०९:३१
कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई १ लाख ११ हजार १ सय ११ प्रदान — फाेटाेसहित
२०७७, २७ असार शनिबार २१:३७
अाजै २४ जनाले काेराेना जितेर घर फर्किए
२०७७, ३० भाद्र मंगलवार २०:२०
एसइई पुरक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित
२०७६, १५ आश्विन बुधबार १६:१८